Google Analytics - အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစီရင်ခံစာမက်ထရစ် Martech Zone
Google Analytics - အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစီရင်ခံစာမက်ထရစ်
တနင်္ဂနွေ, ဇူလိုင်လ 17, 2016 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 ဂျယ်ရမီ Durant
ဝေါဟာရ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဤသည်နေ့ရက်ကာလမဟုတ်ဘဲ buzzworthy ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်များနှင့်စျေးကွက်သမားအများစုသည်၎င်းတို့သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသိကြသည်။ များစွာသောသူတို့သည်မဟာဗျူဟာတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အထိသွားခဲ့ကြသည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ငါတို့သိ C-Suite အဖွဲ့ပြောနေတာကျနော်တို့အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုစတင်သို့မဟုတ်ဆက်လက်သင့်ကြောင်းပြောပါကအခြားသူများကလုပ်နေတာကြောင့်ဖြတ်တောက်ပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၊ အလုပ်လုပ်နေသည့်အရာ၊ အလုပ်မလုပ်သည့်အရာများနှင့်ကွာဟချက်များရှိသည့်နေရာများသို့ထိုးထွင်းသိမြင်စေသည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမက်ထရစ်များစွာရှိသည်။
သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းဗျူဟာတွင်ရှင်းလင်းသောအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများပါဝင်သည်ဖြစ်စေမည်သို့ပင်သင့်ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသင်လုံးဝခြေရာခံရန်လိုသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်မည်သည့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာ၏ပင်မဖြစ်သည်၊ မဟာဗျူဟာသည်အစပြုသည်သို့မဟုတ်ရင့်ကျက်သည်ဖြစ်စေ၊
ဂူဂဲလ် Analytics သည်အလွယ်တကူခြေရာခံနိုင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့၊ လွယ်ကူသည် Google Analytics ကို set upနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာများကိုခြေရာခံနှင့်အကြောင်းအရာလုပ်ဆောင်နေပုံကိုအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာကိုဆန်းစစ်တဲ့အခါ (ဒါမှမဟုတ်မဟာဗျူဟာတစ်ခုဖန်တီးဖို့ပြင်ဆင်နေတာ) ကအခြေခံကျတဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာများကိုအသွားအလာစတင်ခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာအောက်မှာပါ အပြုအမူ> ဆိုက်အကြောင်းအရာ> စာမျက်နှာအားလုံး.
ဤနေရာတွင်အဓိကမက်ထရစ်သည်ထိပ်စာမျက်နှာများသို့အလည်အပတ်ခရီးသက်သက်သာဖြစ်သည်။ ပင်မစာမျက်နှာသည်အမြဲတမ်းအများဆုံးလည်ပတ်သည်၊ သို့သော်၎င်းထက် ကျော်လွန်၍ မည်သည့်အသွားအလာကိုရရှိသည်ကိုကြည့်ခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ သင့်တွင်ရင့်ကျက်သောဘလော့ဂ်ရေးဆွဲခြင်းနည်းဗျူဟာ (၅ နှစ်နှင့်အထက်) ရှိပါကနောက်လာမည့်အများဆုံးစာမျက်နှာများသည်ဘလော့ဂ်များဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသည်မှာအကြောင်းအရာသည်တိကျသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း (သီတင်းပတ်များ၊ လများသို့မဟုတ်နှစ်များအထိပင်) မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။
စာမျက်နှာပေါ်တွင် visitors ည့်သည်များသုံးစွဲသောပျမ်းမျှအချိန်သည်စာမျက်နှာသည်စိတ် ၀ င်စားမှုရှိမရှိကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။
အများဆုံးကြည့်ရှုခဲ့သောစာမျက်နှာများသည်အမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစာမျက်နှာများမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်စီပါ။ စာမျက်နှာပေါ်တွင်မည်သည့်စာမျက်နှာများသည်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သုံးစွဲမှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်ကိုကြည့်ရန်စာမျက်နှာပေါ်ရှိအချိန်။ အနိမ့်စာမျက်နှာကြည့်ရှုခြင်း (2, 3, 4) နှင့်အတူစာမျက်နှာများကိုကွဲလွဲချက်များအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောစာမျက်နှာများမှာကြည့်ရှုမှုပေါင်း ၂၀ ကျော်ရှိသောစာမျက်နှာများဖြစ်သည်။
သင်၏အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြက္ခဒိန်တွင်မည်သည့်ခေါင်းစဉ်များထည့်သွင်းရမည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်သည့်အခါမည်သည့်စာမျက်နှာများသည်အသွားအလာအများဆုံး (လူကြိုက်များသည်) နှင့်မည်သည့်စာမျက်နှာများတွင်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်အချိန်ပိုမိုများပြားသည် (စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်) ကိုကြည့်ရန်အရေးကြီးသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ သင်၏အယ်ဒီတာပြက္ခဒိန်နှစ်ခုလုံးသည်ပေါင်းစပ်သင့်သည်။
ကျနော်တို့အတွက် granular ရနိုင်နေစဉ် ခြေရာခံခြင်း နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုကိုတိုင်းတာခြင်း, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၏မဟာဗျူဟာသည်ဖောက်သည်အသစ်များကိုမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ Conversions များကို Google Analytics ရှိရည်မှန်းချက်များကို အသုံးပြု၍ ခြေရာခံနိုင်သည် အက်မင်> ကြည့်ရန်.
Google Analytics သည်ရည်မှန်းချက် (၂၀) ​​ကိုတစ်ကြိမ်လျှင်တစ်ကြိမ်ခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုပညာရှိစွာအသုံးပြုပါ။ အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်မှာအွန်လိုင်းပုံစံတင်ခြင်း၊ သတင်းလွှာလက်မှတ်ထိုးခြင်း၊ စာရွက်အဖြူကူးယူခြင်းနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက် or ည့်သည်တစ် ဦး အားအလားအလာရှိသောဖောက်သည်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြသည့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများကိုခြေရာခံရန်ဖြစ်သည်။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောက်မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ပြောင်းခြင်း> ရည်မှန်းချက်များ> ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် Google Analytics မှာ။ ကားမောင်းခြင်းအတွက်သင်၏အကြောင်းအရာအပိုင်းအစများနှင့်စာမျက်နှာများမည်သို့လုပ်ဆောင်နေကြသည်ကိုယေဘုယျခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည်။
အသွားအလာအရင်းအမြစ်နှင့်အလတ်စားတို့သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်အကြောင်းအရာစာမျက်နှာများသို့မည်ကဲ့သို့အသွားအလာရောက်ရှိနေကြောင်းကိုသိရှိရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောမက်ထရစ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Google Ads, LinkedIn, Facebook, Account-based Marketing networks (သို့) အခြားကြော်ငြာကွန်ယက်များကဲ့သို့သောရင်းမြစ်များမှပေးဆောင်သောအရောင်းမြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်နေလျှင်ဒီနံပါတ်များသည်အထူးအရေးကြီးသည်။ ဤပေးဆောင်ထားသောမြှင့်တင်ရေးလိုင်းများသည်မက်ထရစ်၏ဒိုင်ခွက် (နှင့်ခြေရာခံပစ်ဇယ်များကိုပေးသည်) ဖြစ်သော်လည်းအကောင်းဆုံးအချက်အလက်များ၏ရင်းမြစ်မှာ Google Analytics တွင်ဖြစ်သည်။
ရည်မှန်းချက်တစ်ခုစီအတွက်သင်၏ပြောင်းလဲမှုများသည်မည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုလေ့လာပါ ပြောင်းခြင်း> ရည်မှန်းချက်များ> Goal Flow အစီရင်ခံစာ။ သင်ကြည့်ချင်သောရည်မှန်းချက်နှင့်ထိုပန်းတိုင်ပြီးဆုံးရန် (ပြောင်းလဲခြင်း) အတွက်အရင်းအမြစ် / အလတ်စားကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် Google Organic၊ Direct, CPC, LinkedIn, Bing CPC စသည်ဖြင့်မည်သည့်အကြောင်းရင်းများမှရရှိသည်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
သင်၏အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုများသည်ရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြည့်ပါ ဝယ်ယူမှု> ယာဉ်အသွားအလာ> ရင်းမြစ် / အလတ်စား.
ဤအစီရင်ခံစာသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားအားအဓိကအရင်းအမြစ်များနှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားများသည်အဓိကရည်မှန်းချက်အပြောင်းအလဲများကိုမည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မောင်းနှင်နေသည်ကိုကြည့်ရှုစေသည်။ ထို့အပြင်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုချင်းစီအတွက်မည်သည့်နေရာမှမည်သည့်နေရာတွင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်သည်ကိုဖော်ပြရန် (Goal Flow report နှင့်ဆင်တူသည်) အစီရင်ခံစာအားအသုံးချနိုင်သည်။ စာမျက်နှာများ / ကဏ္sessionများကိုစစ်ဆေးရန် Avg ။ ဤစာမျက်နှာများအတွက် Session Duration နှင့် Bounce Rate
အကယ်၍ အရင်းအမြစ် / အလယ်အလတ်အဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းနိမ့်ကျလျှင်၊ စာမျက်နှာအနိမ့်အမြင့်၊ session အနိမ့်၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကြာချိန်နှင့်မြင့်တက်နေခြင်းကြောင့်၎င်းအရင်းအမြစ် / အလတ်စားသည်အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များအတွက်မှန်ကန်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟုတ်မဟုတ်ကိုဆန်းစစ်ရန်အချိန်တန်ပြီ။
ဂူဂဲလ် Analytics ပြင်ပတွင်ငွေပေးချေသည့်ကိရိယာများများစွာရှိသည် SEO ကိုခြေရာခံ နှင့် သော့ချက်စာလုံးအဆင့်။ သော့ချက်စာလုံးများအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်မည်သည့်အကြောင်းအရာအပိုင်းအစများဖန်တီးရန်နှင့်အွန်လိုင်းတွင်မည်သည့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များရှာဖွေနေသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်သည် သင့်ရဲ့ပေါင်းစည်းသေချာပါစေ Google Analytics ဖြင့်ဂူဂဲလ်ရှာဖွေရေး Console အကောင့်။ ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူများမှသော့ချက်စာလုံးများသည်သင်၏ဆိုဒ်သို့အော်ဂဲနစ်အသွားအလာကိုမောင်းနှင်နေသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးနိုင်သည်။
ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော SEO ကိရိယာများပါဝင်သည် Semrush, gShift, Ahrefs, BrightEdge, ဉီးစီးနှင့် Mosiah။ အကယ်၍ သင်သည်အချို့သောသော့ချက်စာလုံးများအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတိုးမြှင့်လိုပါက (ထိုစကားလုံးများအတွက်ပိုမိုအသွားအလာရရှိရန်) လိုပါက၊ ထိုဝေါဟာရများနှင့်ပတ်သတ်သောအကြောင်းအရာများကို ဖန်တီး၍ မြှင့်တင်ပါ။
ဂျယ်ရမီ Durant သည် Bop Design မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည် B2B ဝဘ်ဒီဇိုင်း နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီ။ ဂျယ်ရမီသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်လိုအပ်ခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာလိုအပ်နေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးသူတို့အားထူးခြားသောတန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်နှင့်ဖောက်သည်၏စံနမူနာကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီသည်။ ဂျယ်ရမီသည် Merrimack ကောလိပ်မှသူ၏ BA နှင့် California State University မှ San Marcos မှ MBA ရရှိခဲ့သည်။ သူ၏စာအရေးအသားသည် CMS ဝိုင်ယာလက်၊ အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာန၊ EContent မဂ္ဂဇင်း၊ B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ Insider၊ Visibility Magazine နှင့် Spin Sucks တို့တွင်ဖြစ်သည်။